Bad Education (2019) | MM Movie Store
ဒီရုပျရှငျက ၂၀၁၉ ခုနဈထှကျ Biography/ Crime ဇာတျကားဖွဈတယျပွောရရငျတော့ ဖွဈရပျမှနျပေါ့ဗြာ…ဒီရုပျရှငျရဲ့ ဇာတျလမျးအကဉျြးက…ဖရနျ့ဆိုတဲ့ လူတဈယောကျရှိတယျ သူက ကြောငျးဆရာဟောငျး..အခုတော့ ရိုဆလငျးပွညျနယျက အစိုးရကြောငျးမှာကြောငျးအကြိုးတျောဆောငျကောငျးတဈယောကျဖွဈနပွေီ..
သူက သိပျကိုတျောတဲ့လူတဈယောကျ…သိပျဦးနှောကျကောငျးတယျ…ဒီကြောငျးကွီးကို သုညအဆငျ့ကနထေိတျထိတျကွဲကြောငျးကောငျးစာရငျးဝငျလာအောငျ သူပဲလုပျပေးခဲ့တာ…ကလေးမိဘတှကေို သိမျးသှငျးတတျသလို လုပျဖျောကိုငျဘကျတှကေလညျးသိပျလေးစားခဈြခငျကွတာပေါ့….
ဒီလောကျထိပွီးပွညျ့စုံနတေဲ့သူတဈယောကျဆိုတာ ရှိပါ့မလား…ဒီကားကို ဘာလို့ကွညျ့သငျ့လဲဆိုတော့ နံပါတျတဈကHuge Jackman က ဖရနျ့နရောမှာ အပိုအလိုမရှိ ကှကျတိ…နံပါတျနှဈ IMDB 7.2/10 ရထားတယျ နံပါတျသုံး ကောငျးကိုကောငျးလို့ဗြာ
ဒီရုပ်ရှင်က ၂၀၁၉ ခုနစ်ထွက် Biography/ Crime ဇာတ်ကားဖြစ်တယ်ပြောရရင်တော့ ဖြစ်ရပ်မှန်ပေါ့ဗျာ…ဒီရုပ်ရှင်ရဲ့ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းက…ဖရန့်ဆိုတဲ့ လူတစ်ယောက်ရှိတယ် သူက ကျောင်းဆရာဟောင်း..အခုတော့ ရိုဆလင်းပြည်နယ်က အစိုးရကျောင်းမှာကျောင်းအကျိုးတော်ဆောင်ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်နေပြီ..
သူက သိပ်ကိုတော်တဲ့လူတစ်ယောက်…သိပ်ဦးနှောက်ကောင်းတယ်…ဒီကျောင်းကြီးကို သုညအဆင့်ကနေထိတ်ထိတ်ကြဲကျောင်းကောင်းစာရင်းဝင်လာအောင် သူပဲလုပ်ပေးခဲ့တာ…ကလေးမိဘတွေကို သိမ်းသွင်းတတ်သလို လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်တွေကလည်းသိပ်လေးစားချစ်ခင်ကြတာပေါ့….
ဒီလောက်ထိပြီးပြည့်စုံနေတဲ့သူတစ်ယောက်ဆိုတာ ရှိပါ့မလား…ဒီကားကို ဘာလို့ကြည့်သင့်လဲဆိုတော့ နံပါတ်တစ်ကHuge Jackman က ဖရန့်နေရာမှာ အပိုအလိုမရှိ ကွက်တိ…နံပါတ်နှစ် IMDB 7.2/10 ရထားတယ် နံပါတ်သုံး ကောင်းကိုကောင်းလို့ဗျာ